Gịnị bụ Forex Market & Otu esi azụ ya na February 2021!
Gịnị bụ Forex Market na Otu esi azụ ya 2021
O nwere ike ịbụ na ahịa Forex bụ otu n'ime ama ama na mbara ụwa. N'ihi ya, e nwere ọtụtụ narị ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na-ekwe nkwa ọnwa n'ọnwa ruo ndị ahịa ego.
Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ n'ime azịza ọhịa ndị a nke ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-enwe ike ịnye ndị na-ere ahịa dị mfe. Enweghị ụzọ dị mfe iji nweta azụmaahịa bara ụba, ọ nweghịkwa ụzọ na-enweghị ihe ọghọm iji mee ya.
Otú ọ dị, site n'ịmụ ahịa ahịa ahịa, ị ga-enwe ohere ka mma iji nwee ihe ịga nke ọma, yana ịme mkpebi ndị dị mma dabere na nyocha na usoro ọgụgụ dị ka nke anyị.
Ọ nwere ike were ọnwa ma ọ bụ afọ n'otu oge iji ghọta ahịa ahụ nke ọma, ma enwere mkpụmkpụ (yabụ ikwu okwu) dịka akara na mgbanaka - niile anyị ga-ekpuchi n'ụzọ zuru ezu n'oge ntuziaka a na ahịa ahịa.
Na ibe a, anyị ga-atụle ihe ahịa Forex bụ na otu ị nwere ike isi zụọ ya. Anyị ga-enyochakwa otu esi edebanye aha na onye na-ere ahịa dị egwu, ụdị iwu Forex, ụgwọ ị ga-atụ anya, ma nwalee ma nwalee usoro iji nyere gị aka belata ihe egwu azụmaahịa gị.
Gịnị bụ Forex Market?
Ahịa ahịa bụ ahịa 'mgbanwe mba ọzọ' (ma ọ bụ FX) - nke ị na-ekwenyeghi na ọ nụrụ. Agbanyeghị, n'aha doro anya - ahịa azụmaahịa bụ ahịa zuru ụwa ọnụ nke ọtụtụ ndị na-etinye ego, ndị na-ere ahịa, ndị ọrụ banki, ego mkpuchi na ndị na-ere ahịa na-azụ ma na-ere ego kwa ụbọchị.
Ndị mmadụ na-agbanwe ego imegide ibe ha dịka 'ọnụego mgbanwe' - dịka ọmụmaatụ GBP / USD (British pounds / US dollar). Ihe a na-enye na ihe a na-achọ ịzụta ọnụahịa na ere ọnụahịa nke otu ụzọ ego ma na-enyere aka na ịkwalite njem njem mba ụwa na azụmaahịa - yana ịkwado ahịa.
Enwere ike iji Forex mee ihe megide oke ọnụego ọmụrụ nwa yana ego mba ụwa. Popularzọ ndị a ma ama iji zụọ ahịa Forex bụ site na ETFs, nkwekọrịta nhọrọ, mgbasa ịkụ nzọ, nkwekọrịta n'ọdịnihu na CFDs.
Enwere ike itinye ihe ndozi na CFD nke dị na 1: 30 na isi FX abụọ, yana 1: 20 na ndị ọzọ FX abụọ. Anyị ga-ekpuchi ụzọ abụọ, leverage na ihe niile dị n’etiti ibe a.
Isi ahia ahia Forex
Ugbu a na ị nwere olile anya nke ọma ihe ahịa azụmaahịa bụ, anyị nwere ike banye ntakịrị nkọwa gbasara otu esi azụ ya. Ka anyị malite site na isi nke Forex ahịa, nke na-agụnye tradable ụzọ abụọ na dị iche iche Forex trading iwu.
Tradable Forex airszọ abụọ
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịzụrụ na ire ego, ị ga-achọ ịma ụdị ụzọ abụọ ga-adị maka gị iji zụọ ahịa. Agbanyeghi na nke a gha dabere na ihe onye ahia gi choro, o ka di nkpa ka i banye ahia ndi anya gi.
Nke a ga - enyere gị aka ịghọta ụdị ohere ị ga - echere, ma nyere gị aka ịchọpụta ihe ọdịmma azụmaahịa gị nwere ike ịbụ.
Otu ụzọ ego ọ bụla na-abịa na ọnụego mgbanwe. Dị ka ọdịdị nke ahịa ahịa ahịa, ọnụego a ga-agbanwe ụbọchị ahia niile - dabere na ọkọnọ na ọchịchọ nke akụ. Echiche bụ ịnwale na ịkọ ma ị chere na ọnụahịa nke FX ụzọ ga-ebili ma ọ bụ daa - na obere oge.
Ka anyị chee na ị kpebiri ịzụ Euro maka dollar US
Na ụwa nke Forex, ụzọ abụọ a gosipụtara dị ka EUR / USD
Ọnụahịa n'oge ederede bụ 1.17
Ihe mgbaru ọsọ gị bụ ịkọ ma ọnụego mgbanwe nke ụzọ ahụ ga-ebili ma ọ bụ n'okpuru 1.17
Anyị ga-ekpuchi iwu ahịa ahịa ahịa n'oge na-adịghị anya. Nke mbu, ka anyi tuo uzo ato di iche iche. Ga-ahụkarị na ụzọ ego abụọ kewara n'ime ụdị - isi abụọ, obere abụọ na osisi abụọ.
Anyị ga-amalite site na ikwu maka ụdị FX abụọ ahịa na mbara ala - nke bụ majors.
Isi ụzọ abụọ mejupụtara US dollar na isi ego ọzọ - dịka Euro, paụnd Britain, dollar Australia, ma ọ bụ yen Japan. Ihe kpatara ụdị FX abụọ niile nwere USD bụ na dollar US bụ ego 'arịlịka' (ma ọ bụ ndoputa) nke ụwa.
Examplesfọdụ ihe atụ nke isi ego ụzọ abụọ bụ ndị a:
EUR / USD (Euro / dollar dollar)
GBP / USD (British paụnd / US dollar)
USD / CHF (US dollar / Switzerland franc)
Ekwela ka aha a ghọgbuo gị, obere ụzọ abụọ dị oke mkpa abaghị uru. N'ezie, a na-azụ ụdị abụọ a na ahịa ahịa ahịa ma ga-enwe 2 mgbe niile majors dị ka ego ndị a kpọtụrụ aha n’elu.
Ihe na-eme umuaka ewepu na majors bụ na ụzọ abụọ a agaghị agụnye US dollar.
Biko lee n'okpuru ihe atụ nke obere ụzọ abụọ:
EUR / GBP (Euro / British paụnd)
EUR / AUD - (Euro / dollar nke Australia)
GBP / JPY (British paụnd / Japanese yen)
CHF / JPY (Switzerland franc / Japanese yen)
NZD / JPY (New Zealand dollar / Japanese yen)
GBP / CAD (British paụnd / dollar Canada)
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke nyiwe ahia ga-enwe ụzọ abụọ ego dị. Maka ndị na-amaghị, ụzọ abụọ a ga-abụ otu isi FX ego, na otu ego na-apụta.
Ọzụ ahịa ndị na-emepe emepe gụnyere Mexico peso, Turkish lira, Thai baht, Uruguay peso na ndị ọzọ. Ọ dị mkpa iburu n'uche na ụzọ abụọ dị iche iche na-esikarị ike karịa ego abụọ ahụ ekwuru, ọ ga-abụ na ọ ga-agbasawanye. Anyị ga-atụle gbasara mgbasa gbasara nke ọma n'oge na-adịghị anya.
Nke a bụ ụfọdụ ụzọ ego abụọ ị ga-enwe ike ịzụ ma ọ bụrụ na onye na-ere ahịa gị na-enye ha:
EUR / TRY (Euro / Turkish Lira)
JPY / NOK (Japanese yen / Norwegian krone)
GBP / ZAR (Pound Sterling / South Afrika Rand)
USD / THB (US Dollar / Thailand Baht)
AUD / MXN (Australian Dollar / Mexico Peso)
Mara: might nwere ike rịba ama na ndepụta ndị dị n'elu na a na-akpọ krone Norwegian ka ọ bụrụ otu ụzọ. Ọ bụ ezie na ọ bụ usoro akụ na ụba siri ike na-akwado krone, ego n'onwe ya adịghị enwe nnukwu ọchịchọ na ọkwa ụwa.
Ọ bụrụ n ’ịbụ ọhụụ maka ịzụ ahịa ego, ị ga - aka mma ịrapara obere na isi ụzọ abụọ. Zọ a ọ dịkarịa ala ị nwere ike ịnweta mgbasawanye na-agbasa iji gbochie ụgwọ - ma ọ dịkarịa ala ruo mgbe obi siri gị ike na ị mụtala ahịa na azụmaahịa ahịa. Na mgbakwunye na nke a, ndị isi na ụmụ aka pere mpe pere mpe karịa akwụkwọ ikike. Dịka, ha dabara adaba maka ndị ọhụrụ.
Ghọta Iwu Asụsụ Forex
Ugbu a anyị tụlere ụdị otu ụzọ dị iche iche, anyị kwesịrị ịbanye na iwu dị iche iche. Iwu bụ akụkụ dị oke mkpa nke azụmaahịa - na-enweghị ha, onye na-ere ahịa gị agaghị ama ihe ọnọdụ gị ịchọrọ igbu na ụzọ ọhụụ ị họọrọ.
Zụta ma Ree Forex Iwu
Mgbe ị kpebiri ụdị ụzọ ị ga-achọ ịzụ ahịa, ị ga-anwale ma maa usoro ị ga-atụ anya ka ọnụahịa ụzọ ahụ gaa.
Ozugbo i kpebiri ị ga-etinye ma a ịzụta ịtụ ma ọ bụ a ere iji. Biko lee anya n'okpuru maka ihe atụ nke etu esi ekpebie usoro a:
Were ya na ị na-ere GBP / USD
Think na-eche na ugbu a price nke a ụzọ ga-ebili
N'iburu nke ahụ n'uche, ị na-etinye a ịzụta ịtụ ahịa na gị
N'aka nke ọzọ, ka anyị kwuo na ị kwenyere na GBP / USD ga-ebelata uru
N'okwu a, ịkwesịrị ịmepụta a ere iji
Ọ bụ ya. Ọnọdụ gị ga-adịgide ruo mgbe ịpụpụrụ ahịa gị. Iji maa atụ, ọ bụrụ n’itinye a ịzụta ịtụ - ịkwesịrị imechi azụmahịa gị site na ịmepụta a ere iwu.
Debe iwu na iwu ahịa
Iwu ndị ọzọ na ndepụta anyị bụ ịgba iwu na ahịa iwu. Nke a bu nnoo ego ichoro ibanye na ahia.
Ka anyị bido n’inye gị ihe atụ mgbe ị ga - eji a ịgba iwu:
Ka anyị kwuo na ị na-ere ahịa EUR / USD
Ọnụahịa dị ugbu a 1.10
Agbanyeghị, ịchọghị ịbanye ahịa ahụ ruo mgbe ọ ruru 1.12
N'iburu nke ahụ n'uche, ị mepụtara a ịgba usoro 1.12
Gị ore ahia ga-eme usoro a ka na mgbe EUR / USD kụrụ na price.
Ugbu a, ka anyị gosi gị otu a ahịa iji tinye n'ọrụ:
Ka anyị kwuo EUR / USD nwere a ịzụta ọnụahịa 1.15
Chọrọ ka iwu gị mechie ozugbo iji nweta ohere azụmaahịa dị mkpụmkpụ
Dị ka ndị dị otú a, onye na-ere ahia gị ga-eme iwu gị na ọnụahịa ọzọ dịnụ
Na nke a, a ga-egbu iwu gị na ọnụahịa dị n'elu ma ọ bụ n'okpuru 1.15
Nke a bụ n'ihi na ọnụ ụzọ ego na-aga na nke abụọ site na nke abụọ
Liitomi iwu, karịchaa, ndị ahịa nwere ahụmahụ na-eji eme ihe mgbe niile. Ihe kpatara ya bu na inwere ike banye onodu n’ahotara ego gi.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, mgbasa ahụ bụ ọdịiche dị n'etiti ịzụta ọnụahịa na ere ọnụahịa nke ụzọ ego. Ọ dị mkpa ịghọta nke ọma ihe 'mgbasa' bụ, ebe ọ ga - emetụta uru ole ị ga - erite na azụmaahịa gị.
N'ihi ya, usoro ntanetị ga-egosi gị ọnụahịa abụọ dị iche iche mgbe ị na-ekwu maka ụzọ ego - ịzụta ọnụahịa, na ere ọnụahịa. Ihe atụ dị iche na ọnụahịa ndị a gosipụtara na 'pips'. Anyị ga-ekpuchi pips n'ụzọ zuru ezu karị, iji kpochapụ alụlụụ. A sị ka e kwuwe, mgbe ị na-ere ahịa na Forex, ị ga-ahụ okwu pips ọtụtụ.
Ka o sina dị, mgbasa bụ otu onye na-ere ahịa gị ga-esi nweta ego iji nye ọrụ. Nke a bụkarị ikpe na nyiwe azụmaahịa na-enweghị ọrụ dị ka Skilling, Capital.com na eToro.
Biko lee n'okpuru ihe atụ nke otu esi agbasa ọrụ na omume, na-eji azụmaahịa eche echiche:
Na-azụ ahịa EUR / USD
Onye ahia gi ekwutela gi a ịzụta ọnụahịa 1.1718
The ere ọnụahịa bụ 1.1716
Mgbasa na EUR / USD bụ 2 pips
Iji mebie-ọbụlagodi na ahia EUR / USD gị, ịkwesịrị ịme uru nke pipụ 2 - ihe ọ bụla dị n'elu nke ị nwere ike ịgụ dị ka uru.
Dị ka ị pụrụ ịhụ site na ihe atụ anyị, mgbasa na ụzọ ọ bụla pụtara na ị na-amalite ahia 'na-acha uhie uhie' ka ị kwuo. Yabụ ebe a, ị ga - abụ pips 2 na uhie. Otu ihe a metụtara mgbe ị na-apụ ahịa.
Anyị ekwuola mkpa ọ dị ịgbasa ma gwa gị na n'ahịa ahịa ọ tụrụ ya pips. Ugbu a, ka anyị kọwakwuo ihe pips n'ezie bụ. Pips bụ otu esi agụta mgbanwe mgbanwe mgbanwe ọnụego. Anyị akọwaala na nke a nwere ike ịgbanwe na ntọala nke abụọ na nke abụọ.
Nwere ike ịchọpụtala na na ihe atụ anyị dị n'elu nke mgbasa anyị gosiri gị EUR / USD dị ka ebe iri anọ. Nke a bụ n'ihi na ọ bụ otu ahụ ka FX abụọ si akwụ ụgwọ ọnụ ala. Yabụ, kama 4 dịka ọmụmaatụ, a ga-ekwuputa gị 1.17 (iji ọnọdụ anyị dị n'elu).
Ka anyị nye gị ihe atụ nke otu pips nwere ike isi metụta azụmaahịa, na-eji GBP / USD dị ka ụzọ anyị:
Ọnụ ego GBP / USD dị na 1.3013
2 awa mgbe e mesịrị, otu ụzọ ahụ dị mkpa na 1.3003
Uru nke GBP / USD adaala 10 pips
Ka anyị kwuo na osisi gị bụ $ 100
Ọnwụ gị ma ọ bụ uru gị ga-abụ $ 1,000 ($ 100 x 10 pips)
Enweghi isi na otutu iwu na ndu, ma a bia na mbu uzo a na-ekwu na ihe onu ogugu 4 - ewepu bu yen Japanese. JPY bụ ọnụọgụ abụọ mgbe ntụpọ - dịka ọmụmaatụ; 2.
Forex Trading Fund Management na Mgbaru Ọsọ
Ilekwasị anya na njikwa ụlọ akụ gị ga - eme ka azụmaahịa gị mara gị mma ma nyere gị aka itolite dịka onye na - etinye ego. Mgbe a bịara n'ibelata ihe egwu gị na ijikwa isi obodo gị mma, enwere ụfọdụ iwu na ngwaọrụ nke nwere ike ịba uru nye ndị ahịa azụmaahịa.
Ka anyị bido site n'inyocha otu leverage nwere ike isi so na azụmaahịa gị - yana otu ị ga - esi jiri mmachi mmebi n'ụdị nkwụsị-ọnwụ na were-uru iwu.
Leverage bụ akụkụ dị mkpa nke ịzụ ahịa azụmaahịa maka ọtụtụ ndị ahịa oge. Iji dokwuo anya, leverage a na-enye site na ọtụtụ nke Forex trading saịtị na-enyere gị aka ahia na ihe ego karịa ka i nwere na akaụntụ gị.
Ka anyị kọwaa n'ihu - leverage bụ iji ego. Ihe ka ụgwọ gị dị elu, uru gị nwere ike ịbụ karịa - n'ezie, akụkụ nke ọzọ nke mkpụrụ ego ahụ bụ na mfu gị nwere ike ịba ụba karịa.
N'ihe banyere Forex, a na-enye ndị na-ere ahịa ikikere ikike ịnye ndị ahịa ụlọ ahịa na UK, Europe, na n'oge na-adịghị anya-Australia (nke pụtara na ọ bụghị ọkachamara) 1: 30 na isi FX ụzọ abụọ, na 1:20 na Ọkpụkpọ na umuaka.
Ka anyị nye gị ihe atụ bara uru banyere otu leverage si arụ ọrụ:
Ọnụ ego dị ugbu a na ụzọ a bụ 1.3520
$ Nwetara $ 500 fọdụrụ na akaụntụ azụmaahịa gị
Create mepụtara a ịzụta ịtụ iji 1:30 leverage
4 awa gasịrị GBP / USD bụ 1.3790
GBP / USD hụrụ 2% ịrị elu na uru
Cash na-enweta ego gị na uru site na ịmepụta a ere ịtụ ahịa na gị
Ọ bụrụ na itinyeghị ego gị, azụmaahịa a gaara eme gị $ 10 ($ 500 + 2%). Agbanyeghị, n'ihi na itinye ntinye ego nke 1: 30 uru gị abala ụba. Ya mere, uru gị bụ n'ezie $ 300 ($ 10 x 1:30 leverage).
Dika anyi meturu aka, itinye ntinye onu kwesiri iji nlezianya mee ya dika o nwere ike ime ka ihe ojoo gi karie. Nke a bụ ebe nkwụsị-ọnwụ na were-uru iwu nwere ike ịba uru.
Mitigating Egwu: Kwụsị-Loss Iwu
Site n'ịnọnyere anyị ruo ugbu a ị kwesịrị ịnwe nghọta siri ike banyere iwu dịka ịzụta na ere, ahịa na ịgba iwu.
Ugbu a, n'usoro ijikwa ego azụmaahịa gị - nkwụsị-ọnwụ iwu na-enye gị ohere ịpụ na azụmaahịa gị na oge akara aka - iji zere mfu ọ bụla ọzọ.
Ga-ahụ n'okpuru ebe a ihe atụ nke mgbe a nkwụsị-ọnwụ nwee ike iji ya na azụmaahịa azụmaahịa:
Ka anyị kwuo na ị na-ere ahịa CAD / AUD
Action mee ihe a ịzụta ịtụ na 1.0710
Chọghị ida karịa 2%
N'iburu nke a n'uche, ị mepụtara a nkwụsị-ọnwụ ịtụ na 1.0495
Uru nke CAD / AUD na-ada naanị 2 awa mgbe e mesịrị na 1.0281
Nke a na - anọchite anya ọnụahịa dị ihe dị ka 4%
Gị ore gburu gị nkwụsị-ọnwụ ịtụ na 1.0495 dị ka iwu
Dịka nke dị n'elu, nke a pụtara na kama idafu 4% naanị 2% furu efu
Mkpọchi na-akpaghị aka na Uru: Were Iwu Uru
Dị ka iwu ịkwụsị ọnwụ, iwu ị ga-enweta na-enye gị ohere ịtọlite ​​azụmaahịa - yabụ ikwu okwu. Ebe nkwụsị-ọnwụ iwu na-enye gị ohere imebi ọghọm gị, were-uru iwu na-enye gị ohere igbachi uru gị.
Nke a bụ ihe atụ nke a were-uru ịtụ ahịa na ndapụta ahịa ọzọ:
Mgbe ị na-aga ogologo oge na CAD / AUD ihe mgbaru ọsọ gị bụ inweta uru nke 4%
N'iburu nke ahụ n'uche, ị na-etinye a were-uru ịtụ maka 4% n'elu ọnụahịa ụzọ abụọ ahụ
Mgbe ọnụahịa ahụ ruru, onye na-ere ahịa gị ga-egbu gị were-uru iji mee ka ị kpọchie uru gị na 4%
your nkwụsị-ọnwụ ịtụ na mbụ pụtara na ị na-etinye ihe ize ndụ karịa 2%, ebe gị were-uru Usoro iji hụ na ị na-apụ n'ọnọdụ gị na akpaghị aka mgbe ị na-eme 4% na uru. Nke a bụ ụzọ dị mma iji mee ka ihe egwu gị kwụghachi ụgwọ mgbe ị na-azụ ahịa n'ahịa.
Oke Forex Forex
Mgbe ị na-atụle otu ị ga - esi jikwaa ụlọ akụ azụmaahịa gị nke ọma, ị kwesịrị ịtụle ụfọdụ ego kachasị n'ihe egwu ọ bụla. Ọ dị mfe iche banyere nke a dị ka pasent karịa na usoro ego (dị ka dollar ma ọ bụ cents).
Iji nwetakwuo ìhè na ihe anyị bu n'uche na nke a - nnukwu ụzọ iji jikwaa ego nke gị bụ naanị itinye ego dịka ị nwere ike ịkwụ ụgwọ. Ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-etinye nke a na atụmatụ azụmaahịa ha naanị site na itinye 1% ma ọ bụ ihe na-erughị ka ha nwere na akaụntụ ha.
Iji nye gị otu ihe atụ, ọ bụrụ na ị nwere njikwa akaụntụ nke $ 2,000 - anyị agaghị atụ aro iji ihe karịrị $ 20 nke ego gị na otu ahia. Ọ bụ ihe dị adị maka akaụntụ ahịa gị na-agbanwe ka ị na-enweta uru na ọghọm. Agbanyeghị, site na ịhapụ naanị itinye onwe gị elu n'otu oge, ohere ị ga-eji kpochapụ akaụntụ gị niile n'otu mkpebi na-ezighi ezi dị obere.
Gbalịrị ma nwalee Atụmatụ Forex Market
Anyị enweghị ike ikwurịta ịzụ ahịa ahịa azụmaahịa na-enweghị ikwu maka atụmatụ. Ozugbo ị ghọtara ọrụ dị n'ime azụmaahịa mbụ - yabụ, ihe ị ga - azụ ahịa na otu esi etinye iwu - ị ga - achọ iche echiche maka ebumnuche gị na atụmatụ ị ga - eji, ọbụlagodi ịmalite na.
Intobanye ahia na atụmatụ ga-enyere gị aka ịnọ n'ụzọ kwụ ọtọ ma ga-enyere gị aka ịme mkpebi ndị na-adabereghị na mmetụta uche gị. Anyị ejikọgo ọnụ ndepụta ndị a na-ejikarị trading azum eji na Forex ahịa ụwa.
Daybọchị ahia Forex
Ndị mmadụ na- ụbọchị trading Forex na-eme ka ọnọdụ ahia mepee maka ihe na-erughị otu ụbọchị (ya mere aha ya). Nke a nwere ike ịpụta imechi ọnọdụ n'ime nkeji, ma ọ bụ awa.
Tradingbọchị ahia na-agụnye imeghe ma mechie ọtụtụ ahịa n'otu ụbọchị, na-ejikarị ego. Ọ bụ ezie na uru dị ntakịrị, yana ọtụtụ azụmaahịa, uru na-abịa obere mana dị oke mkpa - mgbe mgbe. Ndị ahịa a na-akwụ ụgwọ ego ego abalị (nke anyị ga-ekpuchi ma emechaa).
Forex scalping abụghị ụzọ kachasị mfe iji azụmaahịa Forex. Ọ dịghị mfe dị ka nna ukwu dịka atụmatụ ndị ọzọ, yabụ ọ bụ naanị ndị ahịa azụmaahịa na-eji ya eme ihe. Ebumnuche ebe a bụ irite uru site na obere mgbanwe mgbanwe na ụbọchị azụmaahịa.
Nke a nwere ike ịgụnye itinye ọtụtụ iwu n'ime obere oge. Dị ka aha na-egosi, ndị ahịa a isi ala na-erite obere uru oge ọ bụla otu ụzọ mbibi na-agbanwe n'otu ebe.
A ka na-eche ịkpụcha dị ka atụmatụ dị oke egwu, ọkachasị ma ọ bụrụ na ejiri ya na mbụ were-uru na nkwụsị-ọnwụ iwu. Obere na ha nwere ike ịpụta, ọ bụrụ na emee ya n'ụzọ ziri ezi, uru ndị a nwere ike ịgbakwunye izu azụmaahịa na-aga nke ọma n'oge na-adịghị anya.
Szụ ahịa Forex Swing
Ọ bụrụ na ị bụ onye mbido mgbe ahụ ị nwere ike ịchọta Forex na-azụ ahịa a ezi uche nhọrọ. Na mkpokọta, ịzụ ahịa dị mma maka ndị ahịa na-adị mkpụmkpụ na-ahọrọ iji azụmaahịa azụmaahịa ntakịrị ntakịrị gbanwere.
Ndị na-azụ ahịa swing na-enwe ike imepe ahịa ha otu ụbọchị ma ọ bụ ọbụlagodi izu abụọ, oge ụfọdụ ọnwa. Ihe mere eji azụ ahịa na-agbanwe agbanwe bụ na ebumnuche bụ ịgbaso usoro nke ụzọ ị na-azụ, nke nwere ike ịdịru ọtụtụ awa ruo ọnwa.
Ekwesighi ka ngosi akaụntụ ngosi ghaa. Ha bụ ngwa ọrụ kachasị mma maka azụmaahịa azụmaahịa ọhụụ na ndị azụmaahịa azụmaahịa. Ihe kpatara ya bụ, ụlọ ọrụ na-ere ahịa na ntanetị na-enye ndị ahịa akara ngosi na-enye gị ohere ịzụ ahịa na ahịa azụmaahịa nke gosipụtara ọnọdụ ego n'ezie. Ọbụghị naanị nke ahụ mana a ga-enye gị ego akwụkwọ, dị ka ego ngosi.
Nke a pụtara na ị nwere ike ịme usoro ọhụụ azụmaahịa ọhụụ ruo mgbe obi gị nwere afọ ojuju, ma ọ bụ ị nwere ike ịmụta ụdọ ahịa ahụ na-enweghị itinye ego gị n'ihe egwu.
Iji mgbaama na akpaghị aka Forex Market Systems
Anyị kwuru na mbụ na enwere ụzọ mkpirisi, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, maka ndị na-aghọtabeghị nyocha teknụzụ na chaatị ọnụahịa nke azụmaahịa azụmaahịa gụnyere. Ma ọ bụ ikekwe, ị naghị enwe oge na nraranye dị mkpa iji merie ya zuru ezu.
Ọ bụrụ na ịnụbeghị banyere ngwaọrụ ndị a, na nkebi a anyị ga-amaba na mgbaàmà, azụmaahịa enyo, na ígwè ọrụ ntanetị.
Na nke ahụ kwuru, ka anyị banye n'ime.
Forex Trading n'ókè
Ka anyị malite site na akara ngosi ahia. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ha bụ ‘ntụnye’, ma ọ bụ ‘ihe na-akpalite’ na-adabere n’ihe ndị e mere tupu ha emee dị ka nrugharị olu wdg.
N'ime ya kachasị mfe, akara ahịa azụmaahịa gị ga-agụnye ozi ndị a:
Ka anyị kwuo na ị na-ere GBP / USD
Mgbaàmà gị ga-egosi ma ịkwesịrị idowe a ịzụta ịtụ ma ọ bụ ere ịtụ na mgbe ole
N'ikpeazụ, ọ ga-agụnye nkwanye nkwụsị-ọnwụ na were-uru larịị
Ihe niile ị chọrọ ime mgbe ahụ tinye iwu ndị akwadoro na onye na-ere ahịa gị
E nwere akara ngosi dị iche iche ma ha enyere gị aka ịzụ ahịa na azụmaahịa azụmaahịa na-enweghị ike ịmụ nyocha ma ọ bụ nyocha teknụzụ ma ọ bụrụ na ịchọghị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ụda olu site na akara ngosi Forex, anyị na Mụta 2 Trade maara nke ọma na oghere a. Anyị na-enye akara ngosi 3 x n'efu kwa izu ka ị wee nwee ike ijide ọrụ anyị. Ozugbo ị gbanwere ọrụ ọrụ anyị (nke na-abịa na nkwa ịkwụ ụgwọ ụbọchị 30), ị ga-enweta n'etiti akara 3-5 kwa ụbọchị.
I nwere ike ịgụtakwu banyere nke anyị Forex n'ókè Ebe a.
Mirror Trading na Forex Market
Nke a bụ atụmatụ dị egwu nke na-enyere ndị ahịa aka i copyomi onye ahịa nwere ahụmahụ. Na usoro nke onye nkịtị, ihe ọ bụla ego ha na-ere ga-egosipụta na pọtụfoliyo azụmahịa gị.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọ bụrụ na ị kpebie idetuo onye na-azụ ahịa ọkachamara na Forex ma ha gbanye 0.4% nke pọtụfoliyo ha na AUD / USD na 0.3% na GBP / USD - mgbe ahụ, 0.7% nke pọtụfoliyo gị raara onwe ya nye ndị abụọ ahụ.
Otu n'ime usoro ntanetị kachasị mma iji detuo onye ahịa bụ eToro. E nwere ọtụtụ ndị investors ịhọrọ site na ndekọ ndekọ egosipụtara. Ga-enweta ohere ha stats - dị ka nloghachi, ahọrọ ụzọ abụọ, na nkezi ahia size. Nwere ike ịmalite i copomi onye na-ere ahia site na obere ihe $ 200 n'elu ikpo okwu.
Akpaghị aka Trading ígwè ọrụ na- Forex Market
A na-akpọkwa ígwè ọrụ na-akpaghị aka Forex dị ka EAs (ọkachamara ọkachamara). Na nkenke, robots forex na-enye gị ohere ịzụ ahịa n'ụzọ zuru oke, ebe ọ bụ na robot na-emere gị ihe niile.
Ka anyị kọwaa n'ihu - n'adịghị ka 'ahịa azụmaahịa' ahụ anyị kwuru na mbụ ọ gaghị abụ mmadụ na-etinye iwu ahụ. Kama, akụrụngwa algorithmic na-akpaghị aka ga-enyocha ahịa ndị dị mkpa 24/7 wee mepụta ịzụta na ire iwu maka nnọchite gị.
Iji rụọ ọrụ nke ọma, anyị dị ka ụmụ mmadụ chọrọ ịrahụ ụra nke ọma, yana ọtụtụ ihe ndị ọzọ nwere ike imetụta ikike mkpebi anyị. Dịka, enweghị mmetụta mgbe ị na-eji EA nwere ike ịbụ naanị ihe dị mma. Ọzọ bonus bụ sọftụwia ahụ nwere ike ịgba 24 awa ụbọchị, ụbọchị asaa n’izu.
Zọ kachasị mma iji jiri a forex robot dị ka akụkụ nke usoro ịzụ ahịa gị bụ ịchọta onye na-eweta ọrụ ịchọrọ ma debanye aha. Mgbe ahụ ịkwesịrị ibudata ngwanrọ ahụ ma bulite ya na onye na-eweta ndị ọzọ dị ka MetaTrader4.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ịkwesịrị ijide n'aka na onye na-ere ahịa gị dakọtara MT4 tupu ịbanye. N'ezie, a ka nwere nkwa ọ bụla mgbe ị na-eji robot forex. N'iburu nke ahụ n'uche, anyị na-akwado ịnwale ngosipụta iji hụ ma ọ masịrị gị.
Otu esi achọta onye ahia ahia di nma maka ahia ahia
Iji mee ka ịmalite ịzụ ahịa ahịa azụmaahịa gị, ị ga-ebu ụzọ chọta onwe gị ezigbo onye na-ere ahịa. Dika anyi meturu aka, otutu ndi mmadu na enye onyinye di uku, ufodu adighi nma - ya mere o nwere ike isi ike ile oke ohia maka osisi.
N'iburu nke ahụ n'uche, anyị achịkọtara ndepụta nke usoro metrik iji chọpụta maka mgbe ị na-achọ ezigbo azụmaahịa azụmaahịa. Ọ dịkwa mkpa inwe ezigbo echiche banyere ihe mgbaru ọsọ azụmaahịa nke gị nwere ike ịbụ, iji nyere gị aka ịchọpụta ihe kacha gị mkpa.
Onye ikikere ikike
Anyị kwenyere na site na ịhọrọ onye na-ere ahịa ikikere zuru oke ị na-echebe onwe gị pụọ n'ihe ize ndụ ndị na-ezo na ahia n'ịntanetị oghere. Emechakwa, ọ bụ azụmaahịa dị egwu na-enyefe ego gị n'aka ụlọ ọrụ na-enweghị iwu.
Na ngwụsị nke ụbọchị, e kere ndị na-achịkwa usoro dịka FCA (Financial Conduct Authority) na CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) iji debe ohere ọrụ ego dị ọcha ma dịkwa mma maka mmadụ niile.
Site n'iji naanị ndị na-ere ahịa ikikere ị na-enye onwe gị ọtụtụ nchedo iwu, gụnyere ịchebe mpụ ego na ịlafu isi obodo gị ma ọ bụrụ na onye na-ere ahịa na-efu ego. Ihe kpatara nke a bụ na usoro azụmaahịa ọ bụla na-arụ ọrụ na ngalaba na-achịkwa ga-ekewapụ ndị ahịa gị ego nke ya.
E nwere FX ụzọ abụọ
Ọzọ dị mkpa metric anya maka mgbe ịchọta ezi ore ahia n'ihi na ị bụ ihe Forex ụzọ abụọ dị ka ahia. Anyị ekpuchilarị ụdị ego abụọ tradable na ahịa azụmaahịa. O sina dị, ebe e nwere ihe karịrị 100+ Forex ụzọ abụọ dị adị, ọ bụghị ọ bụla trading n'elu ikpo okwu ga-enwe ike na-enye gị nweta otu ahịa.
N'iburu nke a n'uche, ị kwesịrị ị na-enyocha ihe ga-adị gị mgbe niile tupu ị gawa ma debanye aha ya. Dịka ọmụmaatụ, yị nwere ike ịzụ ahịa otu ụzọ nwere ego ahịa dị ka USD / MXN (US dollar / Mexico peso). Emechakwa, ọ bụghị saịtị azụmaahịa ọ bụla ga-enwe ike ịnye gị otu ụzọ abụọ.
Lọrụ na ụgwọ
Agbanyeghị na ọ dị ka ịchọrọ ịlele ụgwọ - ọ nwere ike ịdị mfe iwepụ na nkwa nke ịga nke ọma n'abalị na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa ego enyere. Nke bụ eziokwu bụ, ọ bụrụ na ị ga-akwụ ụgwọ $ 10 site na onye na-ere ahia maka ọnọdụ ọ bụla ị mepere ma mechie - ịkwesịrị ịmara nke ahụ ka ị wee nwee ike ịtụnye ya n'ime uru gị.
Nzuzo ahia bu ulo oru, ya mere o gha eme ego ka oghara idi ndu - kama nye gi oru. Ozi ọma ahụ bụ na e nwere ọtụtụ ndị na-ere ahịa n'ịntanetị nke ga-enye gị ohere ịbanye na ahịa Forex na ntọala n'efu.
Nke a pụtara na kama ịkwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ na azụmaahịa ọ bụla, ma ọ bụ pasent nke usoro iwu gị - ị ga-akwụ ụgwọ gbasara mgbasa na ụgwọ ego abalị.
Nhọrọ Paymentkwụ edgwọ kwadoro
Tupu ịmee uche gị mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere ahịa, ị ga-achọ ịma otu ị ga-esi nwee ike ịkwụ ụgwọ akaụntụ azụmaahịa gị.
Iji nweta ahia ahia ahia zuru ụwa ọnụ, ị ga-etinye ego opekata mpe (nke onye na-ere ahịa) kwuru na akaụntụ gị. Imirikiti ụlọ ọrụ brokerage na-anabata kaadị akwụmụgwọ / debit, nnyefe waya na ụfọdụ e-wallets.
Otú ọ dị, dị ka anyị kwuru, nke a ga-abụ ihe ịchọrọ iji nyochaa onwe gị tupu ị banye n'ime usoro nyocha. Ọzọkwa, ọ bara uru iburu n'uche na agbanyeghị na ịkwụ ụgwọ site na nnyefe ego akụ na-ewu ewu, ọ ga-ewe ogologo oge iru akaụntụ gị (2 ma ọ bụ 3 ụbọchị ọrụ).
Ndị ahịa ahịa Forex kacha mma ugbu a
Ọ bụrụ n’ị meela nke a site na ndu anyị banyere etu esi azụ ahịa ahịa azụmaahịa, mgbe ahụ ọ ga-abụ na ị na-enwe mmetụta nke ọma na etu esi amalite azụmaahịa azụmaahịa gị.
Agbanyeghị, dịka anyị kwurula, na mbụ ị ga-achọ onye na-ere ahịa ka o nye gị ohere ịbanye na ahịa ego ụwa. Enwere ọtụtụ ndị na-agbanwe agbanwe, ya mere, ịhazi ihe dị iche na nke ọma, nke ọjọọ, na nke jọrọ njọ nwere ike ịbụ ihe ịma aka.
Iji chekwaa gị ụfọdụ ọrụ ụkwụ dị na ịntanetị - anyị ejirila ndepụta nke ndị na-ere ahịa azụmaahịa 5 kachasị elu, ndị a họpụtara site na ọtụtụ puku nọ n'ọrụ na oghere.
1. eToro - Ngwaahịa Forex kachasị mma maka ndị ahịa na-enweghị uche
eToro bụ ndị ahịa ọhụụ ama ama ama ama ama, ọkachasị ndị na-achọ ịnweta ahịa azụmaahịa. The webiste bụ n'ezie mfe na anya na anya si mgbagwoju anya. Ọzọkwa, usoro ntinye aha na-ewe nkeji.
Tradinglọ ahịa azụmahịa a na-akwado ụdị ụdị ịkwụ ụgwọ dị iche iche ma ị nwere ike mepee akaụntụ na $ 200 nwere ezi uche. eToro na-arụ ọrụ na dollar US, yabụ a ga-ebo gị 0.5% na ụgwọ FX - ọ bụrụ na ị kwụọ ụgwọ na ụka ọzọ.
Dị ka azụmahịa na-enweghị ọrụ? Mgbe ahụ, ị ​​ga-enwe obi ụtọ ịmara na eToro na-enye nke ahụ. A gaghị ana gị otu narị ọrụ n'ọrụ. Kama nke ahụ, ụgwọ niile gụnyere na mgbasa na ihe ọ bụla ụzọ ị na-ere ahịa.
Akụkụ pụtara ìhè n'elu ikpo okwu a bụ ngwá ọrụ 'Detuo Onye ahịa'. Nke a na-enye ndị ahịa ohere i copyomi onye ahịa nwere ahụmahụ. Nke a pụtara na ị nwere ike idetuo azụmaahịa ọdịnihu, ma ọ bụ pọtụfoliyo niile, nke pro pro. N'aka ozo, oburu na ha abanye na ebe ere na GBP / JPY nke ruru 0.4% nke pọtụfoliyo ha - Pọtụfoliyo nke gi ghari igosi nka.
eToro na-achịkwa FCA, CySEC, na ASIC. Dị ka ndị dị otú a, ị ga-enwe ike itinye ihe mgbatị ruo 1:30 na azụmaahịa azụmaahịa ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa azụmaahịa UK ma ọ bụ EU. Ọ bụrụ na ị si na mpụga mpaghara ndị a, enwere ike ị nweta oke oke.
Userzụ ahịa ndị ahịa na-eme enyi
Ọrụ azụmaahịa ndị na-enweghị ikike na Commission
Detuo Ahịa oge ọ bụla ọxụ na Forex
0.5% ego ntụgharị ma ọ bụrụ na mmụọ ọjọọ ọ bụla karịa USD
Enweghi nyocha nke oru maka ndi ahia ahia
3. Capital.com - Ahịa-Free Forex Trading
Capital.com, dị ka ndị ọzọ na-ere ahịa na ndepụta anyị, ka akwadoro nke ọma. Na nke a, FCA na CySEC iwu na ụkpụrụ kpuchie gị, nke gụnyere ịkpa oke ego ndị ahịa na usoro mgbochi ịkwụ ego dịka KYC.
Onye na-agba ahia a na-enye ndị ahịa ohere ịzụ ahịa na-enweghị ọrụ na plethora nke akụ dị iche iche. Ngwongwo CFD a na-ere ahịa gụnyere ngwaahịa, indices, cryptocurrencies na n'ezie - Forex. Na mgbakwunye na azụmaahịa na-enweghị ọrụ, ị nwere ike itinye ihe nkwụnye ụgwọ maka azụmaahịa gị rue 1:30. Nke a pụtara na oke nke $ 100 nwere ike bụrụ ihe ruru $ 3,000.
N'ihe banyere ụzọ ịkwụ ụgwọ, Capital.com ekwesịghị ịda mba. Ebe nrụọrụ ahụ na-anabata ụdị niile site na nnyefe waya (nke na-ewe ụbọchị ole na ole) gaa na kaadị akwụmụgwọ / debit na e-wallets dị ka Skrill. Nkwụnye ego gị kachasị nta iji malite ịmalite azụmaahịa site na onye na-ere ahia a bụ naanị $ 20.
Tradingzụ ahịa Forex na ọrụ efu
FCA na CySEC nyere iwu
4. AVATrade - Forex Market CFDs Na-agbasawanye agbasa
AvaTrade nwere ọtụtụ CFDs na-enye ya gụnyere ọla dị ka ọla edo na ọla ọcha, cryptocurrencies na N'ezie, Forex. Leverage na-enye site na nke a ore-capped na 1:30 maka retail ahịa na majors na 1:20 na umuaka.
Dịka onye ahịa, ị nwere ike ịtụ anya ịgbasa asọmpi yana akaụntụ ngosi efu, yana ọtụtụ akwụkwọ mpempe akwụkwọ iji rụọ ọrụ. Ma ị na-achọ ịmalite ịzụ ahịa azụmaahịa site na ọkọ, ma ọ bụ naanị ịnwale atụmatụ ọhụrụ. - nke a bụ ezigbo.
Uzo ahia a nwere ngwa mkpanaka ya a na - akpọ 'AveTradeGo' nke juputara na ngwa bara uru ma nye gi ohere izuta ma ree uzo mbu na ogu.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ofufe nke usoro MetaTrader, AvaTrade zuru oke MT4 na MT5 dakọtara. Nwere ike ịmalite site na onye na-ere ahia a site na $ 100.
Nweta ego na ahia ahia
5. EuropeFX - Nnukwu Ihe Mmụta Azụmaahịa Forex
Dika ị ghaghi igwa aha ya - EuropeFX na-elekwasị anya na ahia ahia. Enwere akụ ndị ọzọ dị ka indices, commodities na cryptocurrency CFDs. Abịa na Forex, a ga-enye gị ihe ruru 1:30 leverage, dịka iwu ESMA si dị.
Azụmahịa azụmaahịa nwere ikike zuru oke ma dezie ya site na CySEC nke Saịprọs, nke bụ otu n'ime usoro nchịkwa kachasị elu n'ụwa niile karịa FCA, ASIC wdg. ma ọ bụ gị mgbe nile n'ụlọ kọmputa ma ọ bụ iOS / gam akporo igwe.
Dị ka ndị ọzọ nọ na listi anyị, ị ga-enwe ike ijikọ akaụntụ EuropeFX gị na MT4 ebe ị nwere ike iji ikpo ọkụ nke ngwa nyocha bara uru yana ọbụnadị mgbanaka mgbanaka akpaaka.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịmalite njem njem ahịa gị na akaụntụ ọkọlọtọ, mgbe ahụ ị ga-achọ itinye ego opekata mpe $ 200. Ihe ndekọ ndị ọzọ n'elu ikpo okwu ruru $ 1,000 na $ 2,500 opekata mpe. EuropeFX na-anya isi na asọmpi na mgbasa ozi na-agbasa ma enwere ọtụtụ usoro ịkwụ ụgwọ.
Jiri nyiwe EuropeFX ma ọ bụ MetaTrader4
Ikike nke CySEC
Akaụntụ a na-akwụ ụgwọ dị oke ọnụ
Họrọ iji Mepee Akaụntụ na Ahịa Forex Market
Imeghe akaụntụ na ikpo okwu ahia, ọkachasị ndị dị na ndepụta anyị, na-adịkarị mfe. Agbanyeghị, n'aha ntuziaka zuru oke, anyị etinyela usoro ije ije dị mfe 3 iji mee ka ị banye usoro ntinye aha.
Mepee Akaụntụ Ahịa Forex
Ihe mbu bu mbu - ị gha acho isi na ebe nrụọrụ weebụ nke onye na-ere ahia ị họọrọ. Ga-ahụkarị bọtịnụ 'debanye aha'. Pịa nke ahụ na obere mpempe akwụkwọ ga-apụta.
N'oge a, ị ga-achọ itinye aha gị, nọmba ekwentị, ụbọchị ọmụmụ, na adreesị ozi-e. Otutu usoro nhazi ahia a gha achoputa oyuyo oyuyo ndi ochichi nyere gi dika akwukwo ikike gi ma obu paspọtụ. Nke a zuru oke, dị ka ọ bụla iwu KYC nke ndị na-enye ikikere ikike.
Nkwụnye ego na Akaụntụ Forex gị
Ugbu a ị mepụtara akaụntụ ị ga-achọ ịkwado ya. Ma ọ bụghị ya, ị gaghị enwe ihe ọ bụla ị ga-eji azụmaahịa Forex. Nke a na-adịkarị mfe.
Debe ego pere mpe chọrọ iji usoro ịkwụ ụgwọ nke ịhọrọ (site na nke dị). Echefula, ọ bụrụ na ị kpebie itinye ego na akaụntụ gị site na iji nnyefe waya ị nwere ike ichere ụbọchị ole na ole ka ọ pụta. Nwere onwe gị n'oge a ịnwale ngosi, ọ bụrụ na ọ dị.
Ebe mbu ahia ahia gi
Ugbu a, etinyere gị niile na akaụntụ ejiri ego - ị nwere ike ịmalite azụmaahịa na azụmaahịa azụmaahịa. Naanị ị chọrọ ịchọta ụzọ FX ị họọrọ ma mepụta usoro.
Nke a bụ ngwa ngwa banyere otu esi etinye usoro izizi gị:
Kpebie n'etiti ịzụta or ere - dabere ma ị chere na ọnụahịa ga-ebili ma ọ bụ daa
Ebe a ịgba Ịtụ /Market ịtụ - tinye na a set price / igbu ozugbo
Tinye Onu ogugu - ego ole ka ị dị njikere itinye n'ihe ize ndụ?
Na-ahọrọ ma ọ bụ megide leverage - ma ọ bụrụ na-ịchọrọ ị itinye leverage, họrọ otutu site na ihe dị
Melite Nkwụsị-efu / Were Uru iwu - anyi na akwadoro iji iwu ndia iji dozie nsogbu / ugwo site na ahia
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, gosi usoro gị na usoro ịzụ ahịa. Anyị nwere olile anya na azụmaahịa izizi gị na ahịa Forex bụ ihe ịga nke ọma!
Ọ bụrụ n ’inweta akụnụba dị nfe dị mfe, ọ gaghị edebe ya n’okpuru 1% nke ndị bi n’ụwa! Agbanyeghị, ọnweghị nsogbu dị n'ịgbalị ịkwa mma?
Enweghị ụzọ isi zụọ ahịa n'ụzọ enweghị ihe egwu. Agbanyeghị, site na isoro ntuziaka anyị ma ọ dịkarịa ala ịnwa imebi ihe egwu gị - ị ga-amalite n'ụkwụ aka nri.
Zụ ahịa ahịa Forex nwere ike ịbụ ụzọ dị mma isi nweta obere uru ugboro ugboro, ma nwee ụzọ dịgasị iche iche nwere ike isi na-ere ahịa. Anyị chere na iji iwu dị ka nkwụsị-ọnwụ na na-enweta uru, dịka ọmụmaatụ, nwere ike inye aka mgbe ị na-esetịpụ ebumnuche ntinye na ụzọ ọpụpụ.
Iji iwu na usoro, yana nyocha, bụ ụzọ a nwalere ma nwalee iji jikwaa otu esi azụ ahịa gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụ ahịa na ụzọ na-agafe agafe, gịnị ma ị nwaa akara ngosi ma ọ bụ robot forex? Y’oburu n’inweghi oge imuta ihe omuma na nyocha nke ihe omuma - ihe ndia gha abia ezigbo enyi.
Kedu onye ahia ị kpebiri, anyị na-akwado ịrapara na onye na-ejide ikikere site na ngalaba na-achịkwa iwu dịka ASIC, FCA, ma ọ bụ CySEC.
Ọbụghị naanị na ị maara na ị na-emeso ezigbo ụlọ ọrụ, mana ị makwaara na a na-ejide ego gị na akaụntụ dị iche na ụlọ ọrụ na-ere ahịa (ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ ga-agba ọsọ).
Mee elu mee ala, gbalịa ịzụ ahịa na oke nke gị, nwee atụmatụ, ma chee maka ebumnuche azụmaahịa gị.
Kedụ ka m ga-esi azụ ahịa na azụmaahịa mbụ?
Iji nweta ohere ịbanye na ahịa ahịa ahịa, ịkwesịrị ịchọta onye na-ere ahịa azụmaahịa n'ịntanetị. Mgbe ịchọtara nke masịrị gị - debanye aha, tinye ego na akaụntụ gị, ma nye iwu maka ụzọ ị chọrọ ịzụ. Usoro enyere ga-adabere ma ị chere na ọnụahịa ga-ebili ma ọ bụ daa.
Kedu ka m ga - esi mara ma onye ahia ahia ọ dị mma?
Ilegide anya maka ikike na weebụsaịtị ya bụ mmalite dị mma. Ndị na-ere iwu na-emetụta ụlọ ọrụ na-achịkwa maka ikikere ma jiri nganga gosipụta nọmba ndebanye aha ha. Ndị na-ere ahịa a ga-agbaso iwu na ụkpụrụ gụnyere iche nke ndị ahịa. Regutù ndị na-achịkwa aha ọma gụnyere FCA, ASIC na CySEC ịkpọ aha ole na ole.
Enwere m ike ịme ahia na azụmaahịa azụmaahịa?
Ee, mgbe ị debanyere aha na onye na-ere ahịa na-enye ndị ahịa akara ngosi, ị nwere ike iji akwụkwọ ego rụọ ọrụ. Dika odi otua, inwere ike inweta ahia ahia na ahia gi n’enweghi ego.
Enwere m ike ịme ego site na iji robot forex?
Nwere ike ịme ego site na iji robot forex, agbanyeghị, ọ pụtaghị na ị ga-eme ya. Curzụ ahịa ego jupụtara n'ihe egwu - ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ka ị kụziere onwe gị n'ahịa tupu ị banye. Iji akara, akara ngosi na usoro ga-enyere gị aka.
Kedu usoro ntanetị kachasị mma maka ịnweta ahịa ahịa?
N'echiche anyị dị umeala n'obi, ndị na-ere ahịa kacha mma na ntanetị n'ịntanetị maka azụmaahịa bụ Skilling, Capital.com, na eToro. AvaTrade na EuropeFX dịkwa mkpa ịgagharị. Ọ bụrụ na ị nwere otu ụzọ ị nwere mmasị na ya, lee mgbe niile usoro ịzụ ahịa ga-enye gị ohere ịnweta ahịa ahụ.